Maaddaama ay kaniisadaha iyo kaniisadaha ku socdaan intarnetka waqtiyo corona ah, waa inaysan dhaafin farriinta badbaadada ee ku saabsan Ciise Masiix ee aan la badbaadin.
Waqtiyadii Kitaabka Quduuska ah, ayay baxeen oo waxay wacdiyeen jidadka iyo jidadka. Maanta, jidadka iyo labajibaaraduba waxay ku jiraan khadka tooska ah. Aynu u baxno halka ay joogaan dadka maanta jooga jidadka iyo garoomada: shabaqa.
Dibadda ugusoo bixi shabaqa
Ciise wuxuu yidhi waxaan u tegi doonnaa dunida oo dhan oo aan injiilka ku wacdinno uunka oo dhan.
Maanta, adduunka ayaa internetka ah. Dadku waxay khadka tooska ah ugu jiraan baraha bulshada iyo warbaahinta bulshada. Markaa khalad nooguma ahayn in aan sidoo kale khadka toos u galno oo marag ka qaadno in Ciise u sheego kuwa ku firfircoon halkaas.
Farriinta ugu muhiimsan
Markaan u dhaqaaqno jidadka iyo daaqadaha maanta, waa inaannaan ilaawin farriinta ugu muhiimsan ee aan u hayno dadka kale ee aadanaha ah ee halkaas jooga. Waxaa loola jeedaa, Ciise Masiix iyo in aad ku badbaadi marka aad isaga aqbalaan.
Waa inaanu si aad ah diirada u saarna dadka cusub iyo kuwa aan keydka aheyn. Si aynaan u jeesan sidii kuwii hore loo badbaadiyey oo aannu dadka wacdinno oo keliya. Maya, waa inaan gaarno kuwa aan badbaadin. Marka aynu u wacdinno iyaga.
Ha ku dhicin dabinka
Ilaah wuxuu iigu yeeray wacdiye, laakiin waxaan ogaaday sida ay u fududahay in wacdinta uu u jeediyo kuwa horay loo badbaadiyey. Yaynaan ku dhicin dabinkaas.
Sababtoo ah haddii aan u wacdiyo badbaadada kuwa aan badbaadin, iyagu ma maqli doonaan farriinta Ciise mana ay heli doonaan fursad ay ku badbaadaan. Markale waxaan leeyahay: yaynaan dabin ku dhicin ee yaan ku wacdin kuwa aan la badbaadin ee keliya kuwa badbaaday mooyee.
Waxaan sidoo kale ogaadey markaan u wacdinayno badbaadada Fariinta kuwa aan badbaadin, kuwa horay loo badbaadiyeyna waa la xoojin doonaa oo iimaankooda wey ku koraan. Waa lagu dhiiri galin doonaa iimaankooda markii aan ku wacdinayno farriinta badbaadada aan la keydsan ee Ciise Masiix.
Vecka 18, lördag 8 maj 2021 kl. 15:31